Matalaadda Caalamiga ah - Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > our Work > Matalaad Caalami ah
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in HB-1194, qaanuunka lagu abuurayo Sanduuqa Difaaca Sharciga Socdaalka ee Gobolka, la saxiixay sharci! Sanadaha soo socda, waxaan rajeynaynaa inaan kobcino sanduuqan ilaa ay ka weynaato in qareen loo fidiyo qofkasta oo gobolka ku sugan oo wajahaya dacwadaha masaafurinta isla markaana aan awoodin inuu bixiyo mid iyaga u gaar ah.
Guddoomiyaha Gobolka Polis oo saxiixaya Sanduuqa Difaaca Sharciga iyo biilasha Qarsoodiga Xogta oo ay weheliyaan kafaala-qaadayaasha biilka, Wakiilada Naquetta Ricks iyo Dominick Moreno.
Sida wax loogu deeqo
Ololaha Matalaadda Caalamiga ah waxa uu abuuray Sanduuqa Difaaca Sharci ee Gobolka oo dhan kaas oo ka caawin doona in qoysaska Colorado la wada ilaaliyo iyada oo la siinayo qareenka dadka wajahaya xadhiga ama masaafurinta kuwaas oo aan si kale u awoodin mid.
Xiritaanka socdaalka ayaa ah nidaamka kaliya ee sharci ee kajira wadanka oo qof lagu xiri karo isagoon xaq u lahayn qareen ay dowladu maalgaliso. Sidaas darteed, dad badan oo dacwadda masaafurinta ah waxay leeyihiin sheegashooyin sharci oo sax ah oo ay ku sii joogayaan Mareykanka, laakiin si kastaba ha noqotee waa la masaafuriyaa maxaa yeelay iyagu ma haystaan ​​khibrad sharciyeed si ay si wax ku ool ah uga doodaan kiisaskooda. Difaaca sharciga ayaa sidoo kale muhiim u ah wax ka qabashada cunsuriyada ka soo horjeedka madoow ee maxkamada socdaalka iyo xarigga dhuumaha masaafurinta, maadaama soogalootiga madoow ay afar jeer ka badan yihiin kuwa soo galootiga aan madowga aheyn inay la kulmaan xarig ama masaafurin sababo ciqaabeed.
70% soo galootiga lagu xiray xarunta lagu hayo dadka socdaalka ee GEO ee Aurora, CO malahan qareen
Muhaajiriinta wakiilka sharciga ah waa 3.5 jeer ayey u badan tahay in lagaa sii daayo dammaanad
Muhaajiriinta wakiilka sharciga ah waa 10 jeer ayey u badan tahay inay ku guuleystaan ​​kiisaskooda
Aad baanu ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in biilkeena HB-1194 lagu abuurayo Sanduuqa Difaaca Sharciga Socdaalka ee gobolka oo dhan uu hadda sharci ka yahay Colorado!
Matalaada caalamiga ah ee maxkamada socdaalka waa inay ahaato waajibaad qaran. Markaan sii wadno riixitaanka sinnaanta, magaalooyin shaqsiyadeed iyo gobollo dalka oo dhan ah ayaa u kacay inay u istaagaan soogalootiga bulshadooda.
Colorado waxay ku biirtaa shan gobol oo kale kuwaas oo abuuray miisaaniyada difaaca sharciga socdaalka gobolka oo dhan: Oregon, New York, Illinois, New Jersey, iyo California
Sannadkii 2017-kii, mowjadda sii kordheysa ee dareenka iyo siyaasadaha ka soo horjeedka soogalootiga, u doodayaasha iyo hoggaamiyeyaasha aagga Denver metro waxay ka shaqeeyeen sidii loo abuuri lahaa Sanduuqa Adeegyada Sharciga ee Muhaajiriinta Denver (DILSF) si loo siiyo adeegyo sharci oo bilaash ah oo tayo leh dadka deggan Denver dacwadaha socdaalka iyadoo loo marayo macaashka maxalliga ah. Barnaamijka Denver, Colorado waxay qaaday talaabo ay ku hogaamineyso dhaqdhaqaaqa qaran ee nidaamka "difaaca dadweynaha" ee loogu talagalay soo galootiga.
Sannadka 2021, Ololahayaga Matalaadda Caalamiga ah ayaa qaaday tillaabada xigta anagoo u ololeynayna sharci cusub si loo abuuro sanduuqa difaaca sharciga ee gobolka Colorado! Sharcigani waxa uu abuuraa lacag la mid ah Sanduuqa Adeegyada Sharciga ee Immigrant Denver (DILSF). Iyada oo loo marayo sanduuqa gobolka oo dhan, Coloradans ee leh kiis masaafurinta waxay u qalmi karaan inay helaan qareen bilaash ah haddii aysan awoodin mid. Marka uu maaliyaddu kordho, soo-galootiga Colorado oo aad u badan ayaa awoodi doona in ay wajahaan xarig iyo masaafuris iyada oo si muhiim ah ay u helaan matalaad sharci.
Ku-deeqaha waxa lagu samayn karaa Sanduuqa Difaaca Sharciga ee Muhaajiriinta iyada oo loo soo dirayo jeeg. Hadda dariiqa keliya ee wax loogu deeqi karo LDF waa iyada oo loo marayo baaritaanno jireed.
Jeega ka samee Waaxda Shaqada iyo Shaqaalaynta ee Colorado
Geli "Sanduuqa Difaaca Sharci ee Imgrant Legal" goobta xusuusta ee jeegga
Jeega u dir: CDLE c/o Jeanni Stefanik iyo Kit Taintor, 633 17th St, Ste 250, Denver, CO 80202
Lacagaha waxaa lagu shubi doonaa koontada Sanduuqa Difaaca Sharciga ee socdaalka waxaana loo qaybin doonaa deeq-bixiyayaasha.
2021 Keenay siyaasadaha socdaalka horumarka Colorado
Sharciyada cusub ee Colorado Newsline nix caddaynta joogitaanka sharciga ah ee faa'iidooyinka iyo shatiyada, samaynta sanduuqa difaaca sharciga Kalfadhiga sharci dejinta 2021 wuxuu keenay guulo isdaba joog ah oo loogu talagalay u doodayaasha muhaajiriinta ee Colorado. Dimuqraadiyiinta, oo haysta aqlabiyadda Aqalka iyo Senatka, gacantana ku haya xafiiska guddoomiyaha, waxay meel mariyeen sharci saameynaya soogalootiga nooc kasta ah. Qaar ka mid ah […]
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in biilkeena HB-1194 uu dhaafay Aqalka iyo Guurtida! Ficilkani sii noolaan maayo oo waxaa loo xafiday ujeeddooyin taariikhda goobta ah. HB1194, biilkeena si loo abuuro Sanduuqa Difaaca Sharciga ee Socdaalka ee gobolka oo dhan, wuxuu ku garaaci doonaa dabaqa guriga codbixin toddobaadkan! Hadda, waxay muhiim u tahay Wakiilladayada Gobollada […]
Ololaha Wakiillada Caalamiga ah ee Loogu Talo Galay Dhammaan Ujeeddooyinka ayaa ah in wax laga qabto mid ka mid ah arrimaha ugu degdegga badan ee helitaanka caddaaladda ee gobolkeenna iyo qarankeena maanta. Magaalada Colorado, ICE waxay xirtay kumanaan muhaajiriin ah waxayna ku haysay xarumaha dadka lagu hayo, taasoo ku qasabtay in badan oo ka mid ah inay wajahaan maxkamada socdaalka iyo xarig la’aan qareen. Cadaalad darradan ayaa horseedaysa […]
Wakiilada gobolka Colorado ee raadinaya sanduuqa difaaca sharciga socdaalka
9News.com COLORADO, USA - Maxkamada socdaalka, yeelashada wakiil sharci waxay macnaheedu noqon kartaa farqiga u dhexeeya joogitaanka Mareykanka ama masaafurinta. Daraasad ay sanadkii 2015 sameysay jaamacada Pennsylvania ayaa muujisay in dadka soo galootiga ah ee qareenka la jooga ay 10 jeer uga badan tahay inay ku guuleystaan ​​kiisaskooda. “Markaad ka fikirto tan, waxaad leedahay […]
Bayaanka CIRC: Maxkamadda Sare waxay la safan tahay qaatayaasha DACA, oo u fidisa gargaar dhalinyarada soo galootiga ah iyo qoysaskooda
Maanta, Maxkamadda Sare waxay ku dhawaaqday xukun 5-4 oo ku saabsan dacwadaha barnaamijka Dib-u-dhigga loogu talagalay Imaatinka Carruurnimada (DACA), iyadoo xukuntay in go'aanka Trump ee ka noqoshada barnaamijka DACA uu ahaa mid aan macquul ahayn oo xamaasad leh.
Maxay yihiin Waraaqaha No-Match ee Maamulka Sooshiyaal Sikiyuuriti?
Ka soo degso Xirmooyinka Warqadda No-Match ee Loo-shaqeeyayaasha iyo Shaqaalaha ka hawlgalayaashayada Xarunta Sharciga Muhaajiriinta Qaranka (NILC).